Ukubuka Ikhompyutha Yami | Martech Zone
Ukubuka Ikhompyutha Yami
NgoMgqibelo, Ephreli 7, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Cishe eminyakeni eyi-6 eyedlule ngathenga ikhadi le-ATI Television lekhompyutha yami. Bengisebenza kumaphrojekthi asemaceleni ebusuku ngakho bengizingcwaba ehhovisi lami bese ngithola ithelevishini ngenkathi ngisebenza. Lokhu kwakungaphambi kosuku lwezikrini ezimbili, kepha kwenze umsebenzi omuhle futhi ngakwazi ukuyibuka kusikrini esincane ekhoneni ledeskithophu yami.
Izikhathi azikashintshi kakhulu ukukutshela iqiniso… Kade ngilinde isikhashana ukuthi kube nentuthuko futhi kubukeka sengathi manje kuyavusa. Okokuqala, ngilayishe Intando yeningi Ithelevishini. Isebenze kakhulu njenge-Feed Reader futhi yangingenisa kuyo I-TV emfushane… Ukubukela izinto zobuchwepheshe be-geek kulula kakhulu noCali Lewis ekhuluma ngakho! Inkinga ebengilokhu ngihlangabezana nayo neDemokhrasi ukuthi bekungeke kulandelele okubukelwe nokungabukelwe kahle. Ngenxa yalokho, angikaze ngithole ukuthi ngangikusiphi isiqephu. Usale kahle wentando yeningi.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ngithole isimemo Joost. Hewu! Ngayilayisha futhi ngahlabeka umxhwele ngaso leso sikhathi. Ukusetshenziswa kohlelo lokusebenza kuyashintsha phakathi kwesikrini esigcwele, iwindi, nemodi yesikrini esincane - elula ngendlela elula futhi ecatshangwe kahle. Futhi, ngiyathanda ukuthi zingaki izinto zemenyu ezivela futhi zinyamalale ngokusebenzisana kwegundane lemvelo. Amamenyu futhi asebenzisa kakhulu i-opacity futhi, ukuze ukwazi ukuqhubeka ubukele futhi ulalele uhlelo ngemuva ngaphandle kokuphazamiseka. Lokhu nakanjani kuzoba yi-hit.
Ngemuva kokusiza abanye abangane ngewebhusayithi abebeyakhela iklayenti, bangimangazile nge I-AppleTV. Kwangethusa ukuphana… nasezulwini lezulu. Ngabatshela ukuthi yayiningi kakhulu indlela… futhi angisoze ngayibuyisela emuva. 🙂 I-AppleTV ayiyibuki ngempela ithelevishini kukhompyutha yakho… ifana nokubuka ikhompyutha kusuka kwikhompyutha yakho kukhompyutha yethelevishini yakho. Hhe? Cabanga i-Ipod yeThelevishini futhi lokho kulingana ne-AppleTV. I-interface ifana nokusebenzisa i-iTunes noma i-iPod futhi ungavumelanisa ne-PC yakho.
Engingathanda ukukufunda ukuthi ngingavele ngilahle kanjani ilabhulali yami yemidiya kusuka kudrayivu yenethiwekhi yami iye ku-AppleTV ngaphandle kokwenza ukuvumelanisa. Nginomtapo omkhulu womculo lapho nazo zonke izithombe zethu. Angifuni ukuba nabo kumtapo wezincwadi we-iTunes… ngifuna ukuwahambisa. Okunye engikuqaphelile ukuthi ungaxhuma kuphela ngephakeji elilodwa le-iTunes ngasikhathi sinye. Angikwazi ukulinda kuze kube yilapho kungenwe ngobugebengu… Ngingathanda ukusebenzisa i-AppleTV yami njengomtapo wolwazi okwabelwana ngawo wonke umndeni (ama-Mac amabili, ama-PC ama-2). Ngikubonile lokho othile usevele wayigqekeza i-AppleTV ukusebenzisa i-OSX… Hmmm. Ngibheke iso lami Ama-Apple TV hacks.
Noma mhlawumbe uJoost ngandlela thile uzoxhumana ne-AppleTV? Kwazi bani… uthuli luyohlala iminyaka embalwa kulokhu kuqhuma - kepha angisakwazi ukulinda ukubona ukuthi kusisa kuphi.
Ukwehla kwepayipi futhi kunezinketho eziningi ze-Add-On zeziphequluli. Isigqoko ku-Scoble, i-ABC isanda kwethula isiphequluli sayo esisha sethelevishini futhi… WOW. Incazelo iyamangalisa futhi i-interface yinhle impela. Manje uma bengathola nje imibukiso efanele ukubukwa!
Tags: ithelevishini ye-abccali lewisithelevishini yekhompyuthaintando yeningi tvi-tv emfushaneukujoyinaUkusakaza ividiyoithelevishini
Lokhu kufanele okuthunyelwe kubhulogi… Ngiyabonga, Kathy!
Izimpophoma vs. Imishini Yokuwasha: Umbono Wokuphathwa Komkhiqizo
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-10: 17 AM
wow .. kuhle kakhulu. UJoost uzwakala ejabulisa kakhulu, ukubhaliswa kwabo kwe-beta kubonakala sengathi kuphansi okwamanje yize .. lokho kumunca.
Ngo-Apr 8, i-2007 ku-10: 19 AM
Banefomu lesimemo kepha, ngokudabukisayo, ngivunyelwe izimemo eziyi-0 kuphela! Ngiyazi ukuthi abanye abantu bakwazile ukumema abantu aba-5… hhayi mina. Uma leyo nombolo iguquka, ngizoqiniseka ukukungeza!
Ngo-Apr 10, i-2007 ku-3: i-35 PM
Ngo-Apr 10, i-2007 ku-3: i-39 PM
Ngisanda kumenywa nguJoost, kepha kuvela ukuthi isoftware yabo ayixhasi iPower PC. Isiphazamisi!